नेपाल आएर ज्याकि च्यानले के के गरे ? बिस्तृतमा । – Namaste Filmy
नेपाल आएर ज्याकि च्यानले के के गरे ? बिस्तृतमा ।
उपत्यकाको जाउलाखेल मैदानस्थित भूकम्पपीडितको बसोबास रहेको अस्थायी शिविरमा मंगलबार अपराह्न हलिउडका प्रख्यात अभिनेता ज्याकी च्यान देखापरे। ‘ज्याकी च्यान आए रे’ भन्दै हल्ला फैलिएपछि वरपरका मानिस पनि मैदानभित्र प्रवेश गरे।
हातमा गुलाफको फूल बोकेका ज्याकीसँग फोटो खिचाउन र सेल्फी खिच्न चाहने प्रशंसक तथा सञ्चारकर्मीको भीडले कडा सुरक्षा घेरामा भएका उनलाई छोप्यो।
उनीबाट राहत लिन ह्विलचियरमा बसेका प्रभावितहरू प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। उनलाई पीडितसम्म पुग्नै हम्मेहम्मे पर्‍यो। चलचित्रमा मार्सलआर्टका चतुर दाउपेच प्रस्तुत गर्ने ज्याकीले पनि चतु:याइँ प्रयोग गर्दै भीडलाई छक्याए।
भीडलाई पन्छाउँदै उनी खुला ठाउँतिर लम्किए। सबै उनको पछि लागेपछि प्रभावितसम्म पुग्ने बाटो खाली भयो। अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतको बाकस वितरण गरेर सबैलाई ‘नमस्ते’ भन्दै अभिवादन गरे उनले। वरपरका घरका छतबाट उनलाई हेर्नेको घुइँचो थियो।
चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीका तर्फबाट नेपालका भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिएको राहत र अत्यावश्यक सामग्री लिएर ज्याकी मंगलबार पौने १२ बजेतिर नेपाल आइपुगेका थिए। एयरपोर्टबाट सोल्टी होटेलमा पुगेर केही समय आराम गरेपछि उनी शिविरमा बसेका प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न निस्के।
जाउलाखेलमा केही समय बिताएपछि उनी ललितपुरकै च्यासल पुगेका थिए। त्यहाँ राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएपछि ललितपुरकै सानागाउँ जाने कार्यक्रम थियो। ‘समय अभाव भएकोले उहाँ त्यहाँ जान सक्नुभएन’, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले बताए।
मंगलबार साँझ उनी नेपाल रेडक्रस र चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीबीच भएको द्विपक्षीय छलफलमा पनि सहभागी भए। ज्याकीले कपडा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री भएको हाइजेनिक किट भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गरेका थिए।
‘ज्याकी आफैं ठूला सहयोगकर्ता हुन्’, धाख्वाले भने, ‘यति ठूलो स्टार भ्यालु भएका कलाकार आफैं आएर राहत वितरणमा सहभागी हुनु नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो।
‘ज्याकी च्यान फाउन्डेसनको सहयोग तथा चिनियाँ रेडक्रसले जुटाएको सहयोगबाट नेपालका भूक पपीडितका लागि पाँच हजार बाकस हाइजेनिक किट ल्याइएको छ।
ज्याकीले नेपालका भूकम्पपीडितका लागि १० लाख युआन (एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ) सहयोग गरेको पनि धाख्वाले जानकारी दिए। चीनबाट केही दिनअघिदेखि नै ती हाइजेनिक किट ल्याउन सुरु गरिएको थियो।
यस क्रममा करिब ४० वटा उडान प्रयोग गरिएको थियो। केही हाइजेनिक किट ज्याकीले मंगलबार वितरण गरेको र बाँकी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने धाख्वाले जानकारी दिए।
ल्हासाबाट काठमाडौं आएका ज्याकी बुधबार चीनको उहानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ पुग्दैछन्।
यो समाचार तथा तस्वीर हामीले अन्नपुर्ण पोष्टबाट साभार गरेका हौ ।
महानायकले ५० काटे ।
सलमानले दिए फ्यानहरुलाई यस्तो धम्की ।